Ukuphuhliswa komzimba komntwana kwiinyanga ezi-4
Ngenyanga nganye umntwana uzuza ubunzima. Abazali banethuba lokulawula ubunzima bomntwana, kufuneka bazi ukuba eli nani kufuneka libe ngama-140 grams ukuya kuma-170 amagremu ngeveki. Ngako oko, umntwana wakho ngeenyanga ezine zobomi kufuneka athole ubunzima ukusuka ku-600 grams ukuya kwi-750 grams. Ngako oko, ukuphakama kwengane kufuneka kwandiswe ngo-2 cm okanye 2.5 cm.
Umntwana ukhula ngokukhawuleza, izihlunu ziphuculwe, umzimba uzuza ukubonakala kunye nokuqina. Ezi zikhombisi-eziqhelekileyo eziqhelekileyo, apho abazali kufuneka baqhubeke belawulwa ukukhula ngokomzimba wengane. Izinga lokukhula komntu kunye nokwanda komzimba okwenyuka kumntwana ngalunye kuye kwadlulelwa ixesha elide ngokwemvelo.
Ekupheleni kweenyanga ezi-4 umntwana, xa elele kwisisu, sele sele ephethe intloko yakhe ngokuzithemba. Nangona elele emhlane, unokunyusa ngokukhawuleza ikhanda lakhe ukujonga imilenze yakhe. Ingane ithanda ukuguqula intloko kuyo yonke indawo, ilinda ngentshisekelo zakho izenzo kunye nawe, ihlola yonke into.
Kwiinyanga ezi-4 usuyakwazi ukuphendulela emva kwisisu sakhe. Iintsana, xa elala emzimbeni, igcina umzimba wakhe xa ixhomekeke kwimphambili yezandla zombini. Ukubamba into enomdla, unokwazi ukukhulula isandla esisodwa kwaye, ukubambelela kwelinye iqhosha, unokubamba isifuba nentloko, ufikelele kumdlalo wokudlala.
Uphucula ukulungelelaniswa kwezibamba. Uphakamisa izandla zakhe aze abukele ngendlela efanelekileyo, ebonakalayo. Iminwe yakhe ayinyanzelwanga, i-handle is straightened. Xa umntwana ethatha umdlalo, uyayigcina kwaye uyayiqhuba ngendlela eyahlukileyo kwaye ilinde ngokusondeleyo indlela ihamba ngayo. Ukusebenza okunjalo kunika uvuyo olukhulu. Iinqabileyo ezintle "ezintle" zizibhokhwe zakhe, iminwe kunye neempundu.
Ngethuba lexesha lobomi bakhe, intandokazi yakhe yokuzivocavoca "ibhasikidi", xa ehamba ngokunyusa imilenze yakhe. Ngamanye amaxesha umntwana uvula imilenze yakhe emadolweni, kodwa xa imilenze yakhe isesimweni esifanelekileyo kwaye ulala ngokuthula. Ukuba wenza i-gymnastics kunye naye, unokubona ukuba xa sithelekisa inyanga edlulileyo, umqhubi wemilenze uye waphucula kakhulu kuwo onke amanqanaba.
Ukuba ubeka umntwana ezinyaweni, uyakubona indlela ekungahambi ngayo kwaye igoba imilenze. Ezi zifundo ziya kunceda ekuqiniseni imilenze. Iyakhupha umntwana, xa ihamba neengoma zabantwana.
Ngexesha lokuhlamba umntwana weenyanga ezi-4 ufuna ukubhukuda kwi-tummy. Udibana, uhlambalaza, wenza ukuhamba kunye namacandi kunye nokukhala xa engakwazi ukwenza ezi ntshukumo. Kwizinto ezinjalo, umntwana ubonisa umnqweno wokufunda ukukhwela. Ncedisa inkunzi kwimizamo yakhe.
Abanye abazali bacinga ukuba kwiinyanga ezi-4 umntwana kufuneka ahlale kwaye akhawuleze le nkqubo bafaka umntwana kumakhonkco. Umntwana uyayithanda, ugcina intloko ithe tye. Kodwa awukwazi ukwenza oku:
izihlunu zomntwana azizinzi ngokwaneleyo ukuhlala kwesi sikhundla;
awukwazi ukushiya umntwana wakho ehleli kwindawo enye ixesha elide, ngenxa yokuba umva womntwana akakwazi ukuhlala kwindawo ehambileyo, i-arches, amathayi umntwana kwaye ikhuthaza ukulungiswa komgudu. Musa ukukhawuleza iziganeko. Kufuneka usebenzise lo msebenzi xa wenza i-gymnastics nomntwana wakho: ngenxa yoko, mthabathe ngeengalo uze uyikhuphe kwindawo ehleli kuyo, uze uyihlalise ngokuthula kwaye uyilawule. Lo msebenzi uqinisa umlenze wengane.
Ngexesha le-gymnastics kunye nosana unokuva ukuxhamla emadolweni akhe kunye neelbow. Asikho isidingo sokukhathazeka, oku kungenxa yokuba izixhobo zokusebenza ezingagqibekanga, zibandakanya i-cartilages, i-tendon, amathambo, imisipha. Emva kwexesha elithile, ukwenza i-gymnastics kunye nokuxilisa imisipha ye-trunk, imilenze, ipenki, baya kuqina ngakumbi kumntwana kwaye ezi zinto aziyi kukuphazamisa wena kunye nosana lwakho.
Ukukhula komzimba kwintsana ezi-4 kufuneka kube phantsi kweliso lwakho, kwaye phantsi kweliso logqirha. Kubalulekile ukwenza kwiinyanga ezi-4 zoqeqesho kunye nayo yonke imiyalelo yengcali yomntwana.
Izambatho zezingane ezincinci
Izifo ezithintekayo kwiintsana ezisanda kuzalwa
Kutheni umntwana ekhala emva kokuzala?
Ubuncinane bokuqala kwasebuntwaneni
Ngaba kubuhlungu kangakanani ukucwenga umntwana osiswini?
I-Cheesecake "eNew York" nge-cherry
Inye yesikhangu sehlile. Unokusombulula njani?
Imifuno - ixabiso lokutya
Ngaba kunokwenzeka ukuphindiselela?
Iimaski zesikhumba esidala
I-Grass mountaineum pochechuyny, iimpawu zonyango
Ungazi njani ubunzima bakho
Indlela yokwenza ngengqondo ngokulahlekelwa ubunzima
Indlela yokuyeka ukutshaya kanye kunye
Kutheni abantu bengenako ukuvelisa abanye abantwana babantu
Iingcebiso ezili-10 malunga nendlela yokugcina ubuhlobo
Silungiselela isaladi engavamile "Ukunyamezela"
U-Anfisa CHEKHOVA: "Xa ndifana nomdlalo, abavelisi abazange bandibone"
Yintoni enxiba ingubo ebusika: 9 imifanekiso emangalisayo
Indlela yokwenza umsila wokulwa ne-cellulite?